Isniinta Cyber ​​wuxuu socdaa Mobile | Martech Zone
Isniinta Cyber ​​wuxuu socdaa Mobile
Axad, Disembar 15, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan la wadaagnay tan macluumaad ah oo ku saabsan faa'iidooyinka ganacsiga moobiilka oo waxaan horey u bixinay caddayn in xilligan fasaxa, ganacsiga gacanta - ama mcommerce - ahaa noqon doonaa weyn. Runtii waa wax laga xumaado!
Tan iyo markii la abuuray 2005, Cyber ​​Monday wuxuu ku soo kordhay inuu noqdo maalinta kaliya ee wax laga iibsado internetka sanadka. Dukaameysiga qadka tooska ah ee xilligan ciidaha ayaa la filayaa inuu ku koro 15% kor u dhaafaya $ 2 bilyan. Xayeysiinta bartilmaameedka ah ee baraha bulshada sida Facebook iyo isticmaalka mobilada oo kordhay ayaa udub dhexaad u ah iibkan khadka tooska ah looga iibsado, waxa si dhaqso ah u noqonaya dukaamaysiga fasaxa.
Ampush waxay soo bandhigtay macluumaadkan, Cyber ​​Monday wuxuu u socdaa Mobile si uu u muujiyo saameynta:
Tags: 2013duubka internetkaganacsigaganacsiga gacanta
Distimo: Falanqaynta App, Beddelka iyo Raadinta App Store
16, 2013 at 5: 29 AM
post kale oo weyn Doug! Waxay ahayd akhris aad u wanaagsan oo macluumaad badan…
16, 2013 at 6: 33 AM
Waa wax lala yaabo sida dhaqsaha leh ee tikniyoolajiyadu u socoto maalmahan. Waxaan si joogto ah ugu arkaa dadka taleefannadooda gacanta, waxaanan si buuxda u aaminsanahay inay tahay mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu kasban karo macaamiisha cusub ama lagu hayn karo. Facebook, gaar ahaan, sidaad sheegtay, waa hab fiican oo suuq loo maro. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in dib u eegista shaqsiyadeed, sida aad adiguba sheegtay, ay tahay hab fiican oo ereyga looga helo wax soo saar weyn.
Waxaan la yaabanahay sida iibka kiniinnada ay ugu habboon yihiin tan? Waxaan arkayaa dad aad iyo aad u tiro badan oo xambaarsan kiniiniyadooda maalin kasta, gaar ahaan dadka ku nool da'da weyn. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay aalad / suuq u baahan in in badan la baaro. Waad ku mahadsan tahay infographic weyn!
16, 2013 at 3: 17 PM
Inta badan tirooyinka halkaas ka jira ee loogu talagalay mobilada dhab ahaan waxaa ku jira iibka kiniiniga, @monicawomble: disqus
17, 2013 at 6: 37 AM
Weyn Waxaan u maleynayay inay aad u muuqan karto inaan lagu darin istaatistikada 😉